အားမရတာမို့ – Grab Love Story
အန်တီ အိဖြူ ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက စောက်ရည်တွေနဲ့ချွဲကျိ စိုရွှဲနေပြီးပူနွေး အိစက်နေတော့သူ့လီးကြီးတစ်ချက် တစ် ချက် ထိုးဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း အသဲ ခိုက်အောင်လိုးလို့ကောင်းတယ်။သူ့လိုး ချက် ဆောင့်ချက်တိုင်းကိုတစ်အင့်အင့်နဲ့ လည်ချောင်းသံပေးပြီးကော့ခံရင်းလီးကို ပြန်ပြန်ဆွဲစုပ်ခံနေရတာကလည်းသိပ်အ ရသာရှိလွန်းနေတော့လီးရည်တွေကလီးတန်သုတ်ပြွန်ထဲမှာပြည့်လာပြီးပန်းထွက် ဖို့အရှိန်ယူနေပြီ။စိတ်က စောက်ဖုတ်ကြီးရဲ့အရသာကိုမက်မောလွန်းလို့ မပြီးလိုက် ချင်ပေမယ့် အတွေ့အကြုံနုသေးတဲ့လူပျိုဆိုတော့ သူ့လီးကဒဏ်မခံနိုင်သေးဘူး။ အဲဒါနဲ့ အန်တီအိဖြူ ရဲ့စောက်ခေါင်းထဲနစ် နေတဲ့လီးကြီးကို စောက်ခေါင်းဝ.ထိဆွဲ ထုတ်ပြီးလေးငါး ချက်ဆတ် ဆတ်လိုးပြီး အရင်းထိအားရပါးရတစ်ချက်ပစ်ဆောင့် ထည့်လိုက်မိတယ်။အားမရသေးတော့ စောက်ခေါင်းထဲမှာ လီးကြီးမြုပ်ထားပြီး နှစ်ချက်သုံးချက်ကပ်ကော့လိုးပစ်တယ်။ အန်တီအိဖြူ ကသူ့ခါးကိုခြေသလုံးတွေနဲ့ အတင်းခွဆွဲကပ်ထားပြီး ဖင်ကြီးချွ ချွ ပင့် တင်ပေးရင်းပြန်လိုးနေပြန်တော့ နောက် ထပ်လေးငားကျော့ ဆက်ဆက်ပြီးဆောင့် လိုးမိတာပေါ့။အန်တီအိဖြူ လက်တွေကသူ့ဖင်ကြီးတွေဆွဲဆုပ်ပြီးစောက်ခေါင်းထဲ မြုပ်နေတဲ့လီးကြီးကိုဆွဲမချွတ်နိုင်အောင် အတင်းဆွဲကပ်နေပေမယ့်..သူ့လီးထဲကလီးရည်တွေကတစ်ဒိတ်ဒိတ်နဲ့ရုန်းထွက် ဖို့အားယူနေကြပြီ။ဒါနဲ့လီးကြီးကိုစောက် ခောင်းအပြင်ထိတေ့ထွက်နေအောင်အား ရပါးရကြီးဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး နှစ်ချက်.သုံး ချက်ပြင်းပြင်းကြီးဆောင့်လိုးရင်းစောက် ခေါင်းထဲမှာလီးကိုကော့ကော့ကပ်ဖိညှစ် ပစ်လိုက်တော့လီးတစ်ဆတ်ဆတ်ခါပြီး လီးရည်တွေတစ်ဖျောဖျော ဆင့်ဆင့်ပြီး ပန်းထွက်သွားတယ်။ ” အားဟာ့..အား.အန်တီဖြူ…ကော့.. ကော့.ကော့ပေးထား .စောက်ပတ်ကြီး ကော့တင်ပေးထား..အားဟား ကောင်း လိုက်တာ..ပေါင်ကြီးတွေကားထားပေး.. ကားထားပေး..ကောင်းတာ.ကောင်းထာ ကောင်းလိုက်တာ ” အန်တီအိဇြူက လက်ဝါးတစ်ဖက်နဲ့ ပားစပ်ကိုလိုက်ပိတ်ရင်း ” ခ်ခ်..ခိခိ..မအော်နဲ့လေကွာ.တိုးတိုး တိုးတိုး လုပ်ပါ..သူ့လီးကြီးနဲ့လူကိုလည်း မုဒိမ်းကျင့်သေးတယ်..အိပ်ပျော်နေတဲ့ လင်ကြီးကြားအောင်လည်း စွပ်အော်နေ သေးတယ်..ခိခိ.ဟိုကနိုးလာပြီးမူးမူးရူးရူးလာကြည့်နေမှဖြင့်သူနောက်တစ်ချီ ထပ် မလိုးရပဲနေဦးမယ်..ဟီဟိ..ထည့် ထည့်. လီးရည်တွေကုန်အောင်သာထည့်တော့. ဟွန်း သိပ်ကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်. ချော့မလိုးပဲ မုဒိမ်းကျင့်လိုးတာ..ဟွန်း..” နွဲ့သလို မူသလို စိတ်ဆိုးသလိုပြောနေ ပေမယ့်အန်တီဖြူ သိပ်ကြိုက်နေပြီဆိုတာ သူ့စောက်ခောင်းထဲနစ်ဝင်နေတဲ့လီးကြီးကိုတစ်စစ်စစ်နဲ့အစုပ်ခံနေရတာမို့ ကြားဖူးနားဝနဲ့ မင်းမင်းသဘာပေါက်မိတယ်။
” ကြိုက်လား အန်တီဖြူ…ပြီးရောပြီးရဲ့ လား..စောက်ရည်တွေတော့ရွှဲနစ်နေတာ ပဲ..ကောင်းရဲ့လား..အန်ကယ်ဝင်းလီးနဲ့ ကျွန်တော့်လီး..ဘယ်လီးကိုပိုကြိုက်လဲ ” ဒေါ်အိဖြူ ကသူ့ရင်ပတ်တွေကိုလက် ချောင်းလေးတွေနဲ့ဆော့ကစားနေရင်းနဲ့ ပေါင်ကြီးတွေကိုမွေ့ယာပေါ်ပြန်ချတော့ စောက်ခေါင်းထဲကလီးရည်တွေစောက် ရည်တွေကလီးချောင်းကြီးကိုပွတ်တိုက် ပြီးပွက်ပွက်လန်အောင်ပြန်ထွက်လာကြ ပြန်တယ်။ ” ဒီလီးကြီးကို ပိုကြိုက်တာပေါ့ကွ..ခိခိ..သူ့လီးကကိုမြဝင်းလီးထက်နှစ်ဆပိုပို လောက်ပိုကြီးတယ်..ဟီဟိ..ခုထိတောင် မတ်နေတုန်း. စောက်ပတ်ထဲမှာသူ့လီးနဲ့ ပြည့်သိပ်နေတာသိပ်အားရတာပဲ..ဟိုလူသာဆို ဒီလောက်လိုးရင်ကျွတ်ထွက်သွား ပြီ..ဒီလောက်ကြီးတဲ့လီးမို့ကြိုက်လွန်းလို့ အလိုးခံတာသိလား ခိခိ.သုံးချီတောင်ပြီးတယ်..မောင် ထပ်လိုးဦးမယ် မလား..” အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းကဆက်တီပေါ်မှာမူး ပြီးခွေခေါက်နေတဲ့သူ့လင်ကြီးအကြောင်း သိနေတော့ သူကထပ်အလိုးခံရဲတယ်။ ” လာ..အဲဒီငမူးကြီး အိပ်ယာပေါ်တင် ပေးပြီး မမဖြူနဲ့မောင်တို့ဟိုအခန်းမှာထပ် သွားလိုးမယ်..ဒီတစ်ခါတော့ မောင်မုဒိမ်းကျင့်သလိုဇွတ်လိုးဖို့မလိုတော့ပါဘူး.မဖြူ ကို စွဲသွားအောင်လို့အောက်ပေးကောင်း ကောင်းပြန်လိုးပေးပါ့မယ်..” ” အခေါ်အဝေါ်တွေ အပြောအဆိုတွေချက်ချင်းပြောင်းသွားပါလား…ခိခိ..” ” ဟင့်..မောင့်လီးရည်ဝင်သွားပြီလေကွာ..အင့်. ဟင့်..ထပ်လိုးနေတာလား.. အာ့.ဆောင့် ကြိုက်တယ်..ကြိုက်တယ်.. သိပ်ကြိုက်..အာ့.အားဟာ့..သိပ်ကြိုက်ပဲ လိုးနိုင်လိုက်တာ..အို့..အားဟာ့..” ပြောရင်း လိုးရင်း.အချက်နှစ်ဆယ် အစိတ် လောက်ကပ်ဖိဆောင့်ပြီးလိုးပစ် လိုက်ပြန်တော့မဖြူမျက်လုံးတွေဝိုင်းစက် တောက်ပလာကြပြန်တယ်။ ” အို့..အို့..သိပ်ကောင်းပါလားကွယ်.. တကယ်ပဲ..သူ့လီးကြီးက မကျဘူးတော့်. တုတ်ခဲပြည့်သိပ်နေတာပဲ..ဆောင့်..အင့် ဆောင့်..အို.အို..တအားဆောင့်ပါကွာ.. သွက်သွက်ကြီးဆောင့်လိုးပစ်စမ်းပါ.မဖြူ ပြီးချင်လွန်းလို့..အီးဟီး..ခါတွတ်နေပြီ.. ဆောင့် ဆောင့်..သွက်သွက်ကြီး.သွက် သွက်ကြီး..အူးဟူး..အီး..တအား..အား.. တအားကောင်းတယ်ကွာ…” အချက်တစ်ရာလောက်ရှိမလားတော့မသိဘူး..သွက်သွက်ကြီးပစ်ဆောင့် ကပ် ဆောင့်လိုးပေးလိုက်တာ့ မဖြူဖင်ဆုံကြီးဆတ်ဆတ်ခါကော့တင်ရင်း စောက်ရည် တွေပန်းပန်းထွက်လာတာ လီးရော.ဂွေးဥတွေရော..နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ပေါင်ခြံတွေ ရောစိုရွှဲအိကုန်တယ်။
ဆတ်ဆတ်ခါ တုန် ရင်နေပြီး မင်းမင်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းထူတွေကိုတအားဆွဲယူစုပ်နမ်းနေရာက ဆတ်ကနဲတွန်းခွာပြီး.. ” သွားမယ်..လာ..ဟိုလူကြီးကိုအိပ် ယာပေါ်တွဲတင်ပေးပြီး ဟိုအခန်းထဲကို သွားလိုးမယ်..တစ်ညလုံးအလိုးခံပစ်မယ် လာ..မြန်မြန်..” နှစ်ယောက်သား အဝတ်တွေကပိုကယို ဝတ်ပြီးဧည့်ခန်းဆက်တီပေါ်မှာမူးမူး နဲ့ခွေခေါက်အိပ်နေတဲ့ဦးမြဝင်းကိုသွားတွဲ ခေါ်တော့..ပုဆိုးတောင်မနိုင်တော့ဘူး။ မဖြူက သူ့ပုဆိုးပြင်ဝတ်ပေးရင်း ” ခိခိ..ဒီမှာကြည့်လေ..ခိခိ..သူ့လီး.. မောင့်လီးနဲ့သားအဖလို့တောင်ပြောလို့ရ နိုင်တယ်..ခိခိ..ပျော့ခွေနေတာပဲ.. လက် မ,လောက်ပဲရှိတော့တယ်.ဟီးဟီး သူ့လီးက တောင်လာလည်းငါးလက်မပေါ့.ခိခိ. တစ်ကယ့်ကိုသေးသေးလေး.. ဒါကြောင့်မို့မောင့်လီးကြီးနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဖူးတာ ” အရက်မူးနေပေမယ့်သူ့ကိုတွဲခေါ်မယ် ဆိုတော့ ဝူးဝူးဝါးဝါး လုပ်နေသေးတယ်။ အိပ်ယာပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီးမဖြူကလီး ရည်တွေ စောက်ရည်တွေရွှဲရွှဲအိနေတဲ့သူ့ စောက်ပတ်ကြီးနဲ့ မျက်နှာပေါ်ခွထိုင်ပြီးဖိ ပွတ်ပစ်တော့မှ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုလျှာနဲ့ ယက် ယက်ပြီးပြန်အိပ်သွားတာ။ အိပ်သွားမှ မဖြူက.မင်းမင်းလီးဒစ်ကြီး ကိုငုံစုပ်ပစ်ပြီး ” ဟင့်..သူ့လီးကမာတောက်ခဲနေတာပဲ..လာ. လိုးစို့ ” အန်တီအိဖြူဆိုပေမယ့်သူ့အသက်ကသုံးဆယ့်ငါးကျော်ခါစ,ပဲရှိသေးတယ်။အ လုံးအထည်ကြီးပေမယ့်ရုပ်ရည်ကနုလွန်း နေတော့ဘယ်သူမှ သုံးဆယ့်ငါးလို့်မထင် ကြပါဘူး။သူ့သမီးဖူးအိ..သားငယ်ပြည့်စုံ တို့နဲ့တွဲပြီးမြင်ကြရတော့မှသူ့အသက်သုံးဆယ့်ငားဆိုတာကိုလက်မခံချင်ပဲ လက်ခံလိုက်ကြရတာချည့်ပါပဲ။သားငယ်ပြည့်စုံကအသက်ဆယ့်ခွန်နှစ်နှစ်နဲ့ ဆယ်တန်းကိုရောက်နေပြီလေ။မင်းမင်းထက် လေးငါးလလောက်တော့ငယ်မှာပေါ့။မင်းမင်းကဆယ်တန်းကျဆိုတော့ အတန်းတူအခန်းတူတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပာ။အန်တီအိဖြူရဲ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကသိသိသာသာ ကြီးနုပျိုလန်းဆန်းဖွံ့ထွားလွန်းပေမယ့်ရုပ် ရည်ကလည်းတအားနုနေတော့ ပြည့်စုံကမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အချိန်တုန်းက စ,နေတယ်ထင်ခဲ့တာ။သူတို့သားအမိရုပ်ရည် မျက်နှာပေါက် မျက်လုံးမျက်ခုံး အသားအရည်တွေကခပ်ဆင်ဆင်တွေချည့်မို့ ပြည့်စုံရဲ့အစ်မကြီးလို့ပဲထင်ခဲ့မိတာ။ နို့ကြီးတွေက အပျိုစင်နို့ကြီးလိုတင်း တင်းမို့မို့ ပြူးပြူးကားကားကြီးတွေဖူးထ, နေလိုက်တာမှ.ဝတ်ထားတဲ့ဘရာစီယာ အပေါ်ကိုလျှံထွက်နေတယ်။နို့လုံးနို့စိုင်ခဲ ကြီးတွေကအိအိထွားထွားဆူဆူဖြိုးဖြိုးနဲ့ ဝင်းအိနေတာလေ. တစ်ခါကနှစ်ခါထပ် ကြည့်မိတယ်ဆိုရင်ပဲ လီးကတောင်လာရတော့တာပဲပေါ့။။ခါးလေးကသေးနွဲ့နွဲ့.. ဝမ်းပျဉ်းသားကပြေလျောလျော..အဆီအပိုရယ်လို့မရှိသလောက်ပြေပြစ်ပြီးဆီးခုံပေါ် ခပ်လျှောလျှောလေးဆင်းသွားတာဆိုတော့သူ့ကိုဗိုက်ကြီးခဲ့ဖူး.ကလေး မွေးဖူးတယ်လို့ပြောရတာ ယုံနိုင်စရာမရှိဘူး။
ဒါပေမယ့်မွေးဖူးခဲ့တာမှနှစ်ယောက် တောင်ရှိတယ်လေ..မယုံချင်လို့လည်းမရဘူး။ မဖြူဖင်ကြီးတွေက အလုံးလိုက် အလုံးလိုက်ကြီးတွေကားဖု ဝန်းဝိုက်နေကြ ပြီး ခြေလှမ်းလိုက်တိုင်းမှာဖင်တစ်လုံးစီ ရွဲ့ ရွဲ့ကားပြီးရွေ့ရွေ့တက်ပြေးသွားကြတာ မြင်နေရတော့သူတို့အိမ်သွားလည်ဖူးစ, နေ့တုန်းကလီးတောင်တာမလျော့နိုင်ခဲ့ဘူး။သမီးကဖုထစ်လုံးကြွနေပါတယ်ဆိုမှ မအေဖြစ်သူကပိုပြီးကြွားကြွားရွားရွားအကြမ်းစားကြီးရမ်းပြနေလေတော့ လီး ကတောင်ပြီးရင်းတောင်မတ်နေတာများ ပုဆိုးရှေ့မှာငေါထွက်နေတယ်။သူတို့ရိပ် မိသွားမှာစိုးလို့ကျောပိုးအိပ်နဲ့လီးပေါ်ကိုမသိမသာလေးဖုံးကာ ဖိကာပြီးနေခဲ့ရတဲ့အပြင် လှည့်ကြည့်လာမှာကိုတောင်မှပူရလွန်းလို့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်..အကဲခတ်နေမိခဲ့ရတဲ့အထိအဖြစ်ကဆိုးခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ပြည့်စုံနဲ့ပိုပြီးရင်းနှီး လာပြီးနေ့တိုင်းအလည်ရောက်နေတော့ စားအိမ်သောက်အိမ်လိုဖြစ်လာခဲ့တော့တာပါပဲ။ကိုယ်ကလည်းကျောင်းမှာအား ကစားတို့.ကိုယ်ခံပညာတို့ အပိုင်းကထူးချွန်နေတော့ ပြည့်စုံကတော်တော်လေးပဲခင်မင်နေတဲ့အပြင် သူ့အစ်မနဲ့တောင်မှသဘောတူချင်နေသလိုလို.ချိတ်ပေးချင် နေသလိုလို စ,နေ နောက်နေတတ်ပြီး ညအိပ်ညနေတောင်မှစာတွေဘာတွေအတူကျက်ရတဲ့အဆင့်ထိအခွင့်အရေးတွေရလာတယ်။ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကသူ့အမေနဲ့ တိတ်တိတ်ကြိတ်ဆော့ချင်နေတဲ့ဇာတ် လမ်းကိုတော့သူရော.ဖူးအိရောမသိကြပဲ ရိုးရိုးပဲမြင်နေကြတယ်လေ။ကိုယ့်ဖက်က အန်တီဖြူ့ ကိုအချိန်တိုင်းပြစ်မှားနေပြီးလိုးချင်ခဲ့ပေမယ့် အန်တီဖြူကတော့ကိုယ့်ကို ရှိတယ်လို့တောင်မှအောင့်မေ့ရဲ့လားမသိ အနေအထိုင်အပြောအဆိုတွေရှိုးတိုးရှန့် တန့်မဖြစ်..သူ့သားပြည့်စုံနဲ့ထပ်တူထပ်မျှပဲသဘောထားနေတယ်ထင်ပါရဲ့.သားအ မိဆက်ဆံရေးလိုပုံမှန်အနေရအထားကမပျက်တော့ မခံချည့်မခံသာကြီးဖြစ်နေရ တယ်။သားအမိလိုဆိုမှတော့မျက်စေ့ရှေ့ မှာတင်ဘရာစီယာချွတ်လိုချွတ်.ပင်တီစွပ် လိုစွပ်..တစ်ခါတစ်လေမျက်လုံးလေးစွေ ပြီးကြည့်လိုက်မိရင်နို့အုံအိအိထွားထွားမို့ မို့တွဲတွဲကြီးတွေကိုအလုံးလိုက်အခဲလိုက် ပက်ပက်စက်စက်မြင်ရတတ်ပြီး စောက် ဖုတ်ကိုတောင်ရေးတေးတေးမြင်ခဲ့ရတာ ခဏခဏပါပဲ။
မင်းမင်းမှာသာမြင်မိတိုင်း အာခေါင်တွေခြောက်ပြီးရင်တွေပူလို့ ရေငတ်လာသလိုလို သေးပေါက်ချင်လာသ လိုလိုနဲ့ လီးတောင်ရပေါင်းများခဲ့ပေမယ့် သူကဘာမှမဖြစ်သလိုလို..တကယ့်သား အမိအရင်းလိုနေပြပြီး ပင်တီကိုတောင်မှ ဘီရိုထဲကထုတ်ခိုင်းနေသေးတော့ခက်ရ တော့တာပေါ့။ပင်တီထုတ်ပေးခိုင်းလိုက်. ဘရာစီယာသိမ်းခိုင်းလိုက်..နို့ ပြလိုက်.. စောက်ဖုတ်မြင်လိုက်..လေးငါးခါဖြစ်လာ တော့ မင်းမင်းလည်းမသိမသာလိုလို.သိ သိသာသာလိုလိုနဲ့ လီးလှန်ပြတဲ့အခါ ပြ မိတာတွေလုပ်တတ်လာတယ်လေ။ရေချိုးသလို အဝတ်လဲသလိုနဲ့ မျက်နှာသုပ် ပုဝါလေးမလုံမလဲပတ်ပြရာက ပတ်မတ် ကြီးတောင်နေတဲ့လီးကိုသူ့ရှေ့ မှာချွတ်ပြ ရဲတဲ့အထိအဆင့်တွေကျော်ပစ်တာပေါ့။ အိဖြူကသူထင်သလိုဘယ်အ,ပါ့မလဲ ပါးလိုက်လည်လိုက်တာမှလှစ်လှစ်လေးပါ။ပြည့်စုံက ဒါသားနဲ့အတန်းဖော် အခင် ဆုံးသူငယ်ချင်း.မင်းမင်းတဲ့မာမီ..ရယ်လို့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေ့ကတည်းကမျက်လုံး ကိုကြည့် လီးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးသိပြီးပြီ လို့ပြောရမယ်ထင်တာပဲ။မျက်လုံးကြီးက နို့ အုံပေါ်တစ်ရစ်ဝဲဝဲဖြစ်နေသလို..သူ့လီး ကြီးတောင်မတ်နေတာကပုဆိုးကိုဖေါက် ထွက်လာတော့မယ့်အတိုင်းပဲ..ဘာနဲ့မှဖုံး လို့ ဖိလို့ ကာကွယ်လို့မရပဲငေါငေါကြီးပြူး ထောက်နေတာကိုး။လူပုံကနုနုလေးနဲ့မို့ မြင်မြင်ချင်းပြည့်စုံနဲ့တန်းတူသဘောထား မိခဲ့တာပါ။သားရဲ့သူငယ်ချင်းပဲလို့ အသိအမှတ်ပြုရင်းမျက်လုံးတစ်ချက်ဝေ့ကြည့် မိတော့ မိန်းမသားတို့သဘာဝအတိုင်းသူ့ လီးကိုမျက်ဝန်းကဖျတ်ကနဲရောက်သွားမိတယ်။ပုဆိုးရှေ့ကိုတစ်ထွာလောက်ကြီး ငေါထွက်နေတော့ ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့အံ့ဩစိတ်နဲ့ နှစ်ခါပြန် သုံးခါပြန် ကြီးကိုကြည့်မိတော့တာပဲ။ဘယ်လောက်ပဲ ကြာနေနေ..ဘယ်နှစ်ခါပဲကြည့်ကြည့် ဒီ ပုံစံ ဒီအရွယ်ကမပြောင်းလဲပဲ လှုပ်စိလှုပ် စိ ငေါ့ငေါ့နေတတ်တာသေချာသွားတော့မှ အသက်ငယ်ငယ်နဲ့လီးတော်တော်ကြီး မယ့်ကောင်လေး လို့အသိအမှတ်ပြုပြီးပို ခင်မိသွားသလိုပဲ..အခွင့်အရေးတွေအား လုံးပြည့်စုံနဲ့တန်းတူပေးပြီးအလိုလိုနဲ့ရင်း နှီးသွားမိတယ်။ဒီလောက်ရှည်နေမှတော့ အတုတ်ကလည်းလက်တစ်ဆုပ်နဲ့ကာမိလမ့်မယ်မထင်ဘူး ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာမိတော့စောက်ဖုတ်ထဲကစိမ့်ကနဲစစ်ကနဲ ပူနွေးသွားပြီးစောက်ရည်တွေစိမ့်လာမိခဲ့ သေးတယ်။
သားသမီးတွေနဲ့အသက်တူ. အရွယ်တူ.အတန်းတူ..နုနုလေးပါလားလို့တွေးလိုက်မိပေမယ့်..လီးကြီးတောင် မတ်နေပုံကမျက်စေ့ထဲပြန်ဝင်လာချိန်မှာ နုထွားကြီးကို စောက်ပတ်ထဲအားရပါးရ မြုံ ပြီးစုပ်ဆွဲပစ်ကြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒကအနိုင် ယူသွားပြန်တယ်။ဒါပေမယ့် သားအမိအရွယ်ဖြစ်နေတာမို့ ရော့ အင့် ဆိုပြီးတော့ထမီချွတ်ချခံလို့လည်းမဖြစ်။ နှစ်လကျော်သုံးလလောက်ဒီသားအမိ နှစ်ယောက်ရဲ့ နို့ ကြီးတွေ ဖင်ကြီးတွေ နဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးတွေကို ဖျိုး တိုးဖျတ်တတ်..ဖျတ်ကနဲ ဖြုတ်ကနဲ မြင် နေရရုံနဲ့ပြန်ပြန်လာရတာ.ကြာလာတော့ မင်းမင်းမရိုးမရွခံစားလာရပြီ။အန်တီဖြူကသူ့သမီးရှိနေတော့အလစ်ရှာပြီးဆွသ လိုလိုရွသလိုလိုလုပ်ပြပေမယ့် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့တော့အလစ်မခံပဲ သမီးအတွက်မို့ မထိရက်သလိုလို.အသက်အရွယ်အတွေ့ အကြုံကွာလို့အထင်သေးသလိုလိုလုပ်ပြ ပြီးပညာပြရှောင်ထွက်သွားတတ်လွန်းလို့ မစားရအညှော်ခံလိုဖြစ်နေရတာကမချင့် မရဲဖြစ်စရာပေါ့။ ” မနေ့တုန်းကအန်တီ ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းခိုင်းလိုက် ပင်တီပန်းရောင်လေး ခြင်းတောင်းထဲမှာမတွေ့ပါလား ကိုမင်း.. ခိခိ..ဟိုဝှာတွေပေနေသလားလို့ ဒီနေ့မှပဲ လျှော်ပစ်ဖို့ကြည့်တာ..မတွေ့ဘူးကွ..ပြန် ရှာပေဦး..ခိခိ ” ဖူးအိနဲ့ပြည့်စုံက သူတို့အဖွားအိမ်မှာအလှူ လုပ်လို့တစ်ညအိပ်သွားကြတယ်။သူတစ်ယောက်ပဲကျောင်းကပြန်လာတာ လမ်းရောက်တော့အန်ကယ်ဦးမြဝင်းရုံးကအပြန်နဲ့ဆုံတယ်လေ။နည်းနည်းလေးမှန်သလိုပဲဆိုပေမယ့် သူနဲ့တွေ့တော့ထပ် ဝယ်ခိုင်းပြန်တာမို့တစ်လုံးဝယ်ပေးလိုက် တာ..အမြည်းလုပ်ပေးရ ရေယူပေးရနဲ့သူ့ အနားကခွာလို့မရတော့ဘူး။အန်တီဖြူ မ ကျေနပ်မှန်းသိပေမယ့် အန်ကယ့်ကိုလွန် ဆန်လို့မှမရပဲ..တစ်နာရီလောက်သည်းခံ လိုက်ရတယ်။သူမူးပြီးဆိုဖာပေါ်မှာဇက် လည်နေပြီဆိုတော့မှအန်တီဖြူကရေချိုးမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာ။ရေချိုးခန်းက လှမ်းခေါ်ပြီမေးတော့ထမီရင်လျှားကြီးနဲ့ နို့ ကြီးနှစ်လုံးကပြူးနေတာပဲ။ကားယား ကွရပ်ပြီးခပ်ပြောင်ပြောင်ကြီးစောက်ဖုတ် ပွတ်ဆေးရင်းမေးနေတာဆိုတော့စိုရွှဲနေတဲ့ရေလဲထမီခပ်ပါးပါး ခပ်ရိရိအောက်မှာ ပေါင်လုံးကြီးတွေထင်းနေပြီး စောက်ဖုတ် ပုံရိပ်ကြီးကပောင်ရင်းကြားမှာဖောင်းကား ထွက်နေတယ်။ ” ဟွန်း.ကောင်လေး.မျက်လုံးကြီးတွေ ပေါင်ကြားထဲလာကပ်နေလို့အစေ့သုံးစေ့ ဖြစ်နေပာဦးမယ်. ခိခိ..ဖူးအိကိုကြည့်ဖို့လဲ ပြန်ယူထားလိုက်ဦး..သွားရှာပေးကွာ.. ပင်တီလျှော်ရအောင် ” တကယ်တော့ ပင်တီကသူ့ကျောပိုး အိပ်ထဲမှာရှိတယ်။ကျောပိုးအိပ်ကို အိမ် ရှေ့ဆက်တီပေါ်ကသွားယူတော့ဦးမြဝင်း ကဆိုဖာပေါ်မှောက်နေပြီ။ကျောင်းမှာသူ့ ကိုမှန်းပြီး ဒီပင်တီနဲ့ဂွင်းတစ်ချီတိုက်ထားတာဆိုတော့ ဒီလောက်ဆိုဒ်ကြီးတဲ့ပင်တီ တစ်ထည်လုံးမှာလီးရည်တွေကဖတ်ဖတ် နစ်အောင်စိုအိချွဲကျိနေတာမခြောက်နိုင် သေးဘူး။ထူးပါဘူး..သူကလည်း ဟိုဝှာ တွေပေနေတယ် လို့ပြောတာပဲ..ဒီတိုင်းပဲ ပေးပစ်တော့မယ် ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကျောပိုးအိပ်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီးယူလာပေးလိုက် တာပေါ့။အန်တီဖြူကပင်တီကိုသေသေ ချာချာဖြန့်ကြည့်ပြီး နမ်းကြည့်နေလို့စိတ် သိပ်မလုံရတဲ့ကြားထဲ မတ်နေတဲ့လီးကြီးကဖျောင်းကနဲပြေးတက်လာတယ်။ ” ခိခိ..အရည်တွေကိုရွှဲနစ်နေတာပဲ.. လျှော်ပစ်ရမှာတောင် နှမျှောစရာ..ခိခိ ” အန်တီဖြူ က နင့်လီးရည်တွေငါသိပါ တယ် ဆိုတဲ့သဘောအပြောလေးနဲ့မျက် လုံးတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်တယ်။
ပြီးမှာလျှာနဲ့ တစ်ချက်နှစ်ချက် တို့ယက်ကြည့်ပြီး ” ဟား…ချိုတယ်ဟဲ့..အနံ့လေးကလဲ သင်းအီနေတာပဲ..ခိခိ..သွားတော့လေ.. ကိုမင်း ကောင်ကြီးကတင်းနေပြီ.တစ်ချီတစ်ဂွင်းလောက် လျှော့လိုက်ဦး..ဟီဟိ.. ရေချိုးရင်းနဲ့မှရှော့တိုက်ချင်ရင်လဲ ခဏ စောင့်..အန်တီပြီးတော့မယ် ” အိမ်ထောင်သည်လည်းဖြစ်နေပြန်.. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စောက်ပတ် တွေ လီးတွေလည်း မသိမသာရောသိသိ သာသာပါ ပြဖူး မြင်ဖူးထားကြပြီးသားသူ တွေလည်းဖြစ်နေပြန်..တစ်အိမ်လုံးမှာက သူတို့်နှစ်ယောက်နဲ့အမူးသမားပဲရှိတာမို့ ဆင်ခြင်နေစရာကမရှိပြန်ဆိုတော့ အိဖြူ ကအပြောအဆို ရဲနေတယ်။မင်းမင်းပြန် ထွက်သွားတော့ အန်တီဖြူကရေလဲထမီ အနွမ်းတစ်ထည်ရင်လျှားပြီး ပင်တီလေး လက်ကတွဲလောင်းနဲ့ရေချိုးခန်းကပြန်ပြီး ထွက်လာတာပေါ့။အခန်းထဲလည်းဝင်ပြီး ရော..တံခါးကြားကမင်းမင်း တုံးလုံးကြီး လီးကတောင်တောင်ကြီးနဲ့ဖျတ်ကနဲခုန် ထွက်လာပြီး သူ့ကိုထမီဆွဲချွတ်ရင်းနဲ့ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လှန်လျက်တွန်းလှဲချခံလိုက်ရတော့တာပဲ။ချက်ချင်းကြီးအလုံးခံ ရတာဆိုတော့ လန့်ဖျတ် ကြောင်အမ်းသွားပြီးအငိုက်ခံလိုက်ရပေမယ့် ကုတင် စောင်းမှာမင်းမင်းကသူ့အပေါ်ပေါင်ကြီး တွေကြားထဲခွင်ကျမှောက်ပြီးနို့ ကြီးတွေ ဆုပ်ချေ နှုတ်ခမ်းတွေစုပ်နမ်းနေတုန်းမှာ ဖျတ်ကနဲသတိပြန်ဝင်လာပြီးအတင်းရုန်း တော့တာပဲ။နှုတ်ခမ်းအစုံကိုသူ့ပါးစပ်ထဲ ကရုန်းထွက်ပြီးခေါင်းကြီးကိုဘယ်ညာအ ဆက်မပြတ်ရမ်းခါပစ်တော့သူမနမ်းနိုင် တော့ပဲ နို့ ကြီးကုန်းစို့တယ်။မဖြူကလဲ.. သူ့ခေါင်းကြီးကိုလက်သီးဆုပ်တွေနဲ့ဆက် ခါဆက်ခါထု..ဖင်ကြီးဟိုရွှေ့ ဒီပြေးဖြစ်နေ အောင်ကိုယ်ကိုရမ်းခါပစ်နေတော့သူ့လီး ကစောက်ခေါင်းထဲဝင်အောင်သွင်းလို့မရ နိုင်ဘူး။စောက်ခေါင်းထဲမဝင်ပေမယ့် ဟို ဖက်ပေါင်ရင်းထိုးလိုက်..ဒီဖက်ပေါင်ရင်း ထိုးလိုက်.စောက်ဖုတ်တစ်ကြောနဲ့အခြေ အရင်းကိုထိုးမိလိုက်..ဆိုတော့အာရုံတွေ ကထွေလာတယ်။မင်းမင်းကလည်းသူ့ နို့ တန်ကြောကိုရှေ့သွားတွေနဲ့ကြိတ်ဆွဲချေ ပြီးနို့ သီးခေါင်းကိုမလွှတ်တမ်းတစ်ပြွတ် ပြွတ်စို့နေတော့စောက်စေ့ကစိမ့်စိမ့်တက် လာပြီး ယွလိုက်လာတာဘာသဘောလဲ တော့မသိဘူး။နို့ စို့ခံနေရတာအားမရတဲ့အပြင်စောက်စေ့ကိုပါပွတ်ချေခံချင်လာတဲ့အထိ စိတ်ကအလိုလိုပါလာတယ်။အဲ လို စိတ်ပြောင်းလိုက်လာတော့ ရုန်းအား လျော့သွားပြီးလှုပ်ရှားမှုတွေပြောင်းလာရ ပြန်တယ်။တွန်းချင်ရာက ဆွဲချင်လာမိသ လို ရှောင်ချင်ရာက တည့်တည့်တိုးပေး ချင်လာမိတော့တာပဲ။ရုန်းအား ကန်အား တွေလျော့ပြီး ဆွဲအားတွေပိုလာတော့သူ့ ကျောကိုထုသလိုလိုနဲ့မသိမသာလေးဆွဲ ဖက်ပေးထားမိတယ်။ကျေနပ်စိတ်နဲ့သိပ် မကျေနပ်စိတ်ကလွန်ဆွဲနေတော့ ဘာမှ သတိမထားမိတော့ပဲသူ့ပုခုံးကြီးကိုဇွ တ် အတင်း.တအားဖက်ပြီးဖိကိုက်ပစ်တာ.. မင်းမင်းက အံကြိတ်အော်ပြီးပါးပိတ်ရိုက် တာခံလိုက်ရပါလေရော။
အံ့ဩစရာဖြစ် နေတာက အဲလိုပါးရိုက်ခံရတာကို ဘယ် လိုမှစိတ်မတို စိတ်မဆိုး စိတ်မနာမိပဲ.အ လိုးခံချင်စိတ်တွေ ဘွားကနဲအုံပွင့်ထွက် လာပြီး စောက်ရည်တွေဖျောကနဲယိုစီး ထွက်လာတယ်လေ.. ” အာ့ အာ့. မလုပ်နဲ့လေကွာ..ကိုမင်း. မလုပ်နဲ့လို့..အန်တီမကြိုက်ဘူးနော်.အာ့ အဲလိုရီး မကြမ်းနဲ့လေ..အိုး..လုပ်ပါနဲ့ဆို. ကိုမင်း..ကိုမင်း လို့..အာကွာ..ဝင်..အား ဟာ့..ဝင်တော့မယ်ကွ..အူးဟူး..တေ့နေ ပြီကွာ..အာ့ အာ့..ကိုမင်းကွာ..ဟင့်.သူ့ လီးကအကြီးကြီးကွ..အားဟာ့.တစ်နေတာကြီးကို.အိုး. ဟိုး.အာ့ ဝင် ဝင်သွား ပြီကွာ ” ” အာ့.ဝင်သွားပြီ..ဟင့် ဟင့် ဝင်သွား ပြီ.အူးဟူး.တုတ်ပြဲကြီး..ပြည့်သိပ်နေတာပဲ..ရှီး..ကျွတ်ကျွတ်..ဟင်း.ကိုမင်း ကိုမင်း ဖြည်းဖြည်းနော်..အန်တီ အိုဟို..မမဖြူ မ ကြိုက်ဘူးနော်..အာ့ ဟင့်..အို့..အို.. ” အသက်သာငယ်တာ.သူ့လီးကအကြီး ကြီးဆိုတော့ လီးကြိုက်တဲ့ဒေါ်အိဖြူခမျှာ အလိုလိုနေရင်းနဲ့ နွဲ့သွားရတယ်။အသွေး အသားကဆူဆူဖြိုးဖြိုး စောက်ရည်ကခပ် ရွှမ်းရွှမ်း.သူ့လင်လီးကသေးတဲ့အပြင်လိုး အားကအလွန်ညံ့.သက်လုံမကောင်းလို့ ဆွဲအားကမရှိပါဘူးဆိုမှကိုယ့်အတွက်ပဲ ကိုယ်ကြည့်ပြီးလိုးလေ့ရှိတော့ ခပ်မြန်မြန် ပြီးအောင်ချည့်ပဲလိုးချသွားလေသမျှကို အောင့်ဧည်းပြီးသည်းခံလာခဲ့ရတာသိပ် ကြာခဲ့ပြီလေ။အခုအလိုးခံနေရတဲ့လီးက သူ့လင်လီးထက်နှစ်ဆကျော်ကျော်ပိုကြီး နေတော့ ကြာကြာလိုးတာ မလိုးတာတွေ မစဉ်းစားနဲ့ဦး..စောက်ခေါင်းထဲကိုထိုးဝင် လာပုံချင်းကိုက အရသာကွာနေပြီ။ပြည့် ပြည့် သိပ်သိပ် ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း နဲ့ ဒစ်ကနဲ ဒစ်ကနဲနေအောင်စောက်ပတ်ရဲ့ ညှပ်ရိုးကြွက်သားတွေ..အတွင်းနံရံသား တွေကိုတိုးဝှေ့ထိုးဖောက်ဝင်လာတာကြီး က အလွန်အရသာရှိလှချည်လား လို့်ထိ ထိမိမိခံစားသိလိုက်တော့ မူးမူးမိုက်မိုက် အလွန်ကြိုက်သွားမိတာပေါ့။ ” အာ့..ကြီးလှချည့်လားမောင်ရယ်.. မမဖြူတအားကြိုက်သွားပြီ..ဟင့် ဟင့်.. သူ့လီးကြီးက ကော့တက်နေသေးတယ် နော်..အာ့..သိပ်ကောင်းတာပဲမောင်.” ” အရင်းထိ ထည့်လိုက်တော့မယ်နော် လီးကတစ်ဝက်လောက်ပဲဝင်သေးတာ ” ” ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း မောင်..အဲလီး ကော့ကော့ကြီးကလဒစ်ကြီးနဲ့ဖြူ့ စောက် စေ့အမြစ်ရင်းကိုကော်ကော်ပြီးဆွလိုးပေး နေတာကြီးက သိပ်အရသာရှိတယ်..အဲ့. အဲ့လို..အဲ့လို..ဟုတ်တယ်မောင်.တအား အရသာရှိတယ်.အဲလိုလေးသွက်သွက်နဲ့ ကြာကြာကြီးလိုးပေးပါလားမောင်ရယ်.. ကောင်းထာ ကောင်းထာ.အီးဟီး ကျွတ် ကျွတ်ကျွတ်..ရှီး..လိုး လိုး မောင်.လိုး ” အလိုးခံရတာကတအားအရသာရှိနေ တော့ စောက်ရည်ကဘယ်လိုမှထိန်းလို့မရဘူး..ရွှဲနစ်နေအောင်ထွက်တော့လီးဝင် လီးထွက်က အရမ်းချောမွေ့ပြီးအရသာရှိ ပြန်တယ်။အပေးအယူမျှမျှနဲ့ အရသာရှိရှိ ဆောင့်လိုက် ကော့လိုက် လိုးနေကြတာ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်နေတော့စိတ်တွေအရမ်းကြွတက်လာပြီးကြမ်းချင်လာပြန် တယ်။
ဒါနဲ့ မင်းမင်းရဲ့ကျောပြင်ကြီးကိုအ တင်းဖက်ပြီး အားမလိုအားမရနဲ့ပုခုံးကိုထပ်ကိုက်လိုက်တာ ပါးကိုနှစ်ချက်ဆင့်အရိုက်ခံလိုက်ရတော့မှ ဖင်ကြီးပစ်ကော့ ပြီး အီး..ကနဲသံရှည်ကြီးအော်ပြီးလွှတ် ပေးတယ်။စောက်ရည်တွေကလည်းဖြိုင် ဖြိုင်ကြီးထွက်လာလိုက်တာမှ မွေ့ယာကို စိမ့်ဖောက်ထိုးနစ်ရွှဲစိုအိသွားတဲ့အထိပဲ။ မဖြူ တအားရွတက်လာမှန်းသိလိုက်ပြီဆို တော့မင်းမင်းကကုတင်အစွန်းပေါ်ခြေစုံတက်ထိုင်လိုးတယ်။မဖြူကမင်းမင်း လိုး လို့ကောင်းအောင် ခြေထောက်နှစ်ဖက် သူ့ပုခုံးပေါ်ပစ်တင်ပေးလိုက်ပြီး. ” လိုး..မောင်..နို့ ကြီးတွေဆွဲပြီးလိုး.. တအားပစ်လိုး..လီးကြီးအရင်းထိဝင်ချင် ဝင်ပေ့စေ..ပစ်လိုး..အင့်..အားဟာ့ အာ့ အူးဟူး.တစ်ကယ်အောင့်တာမောင်ရေ့.. အီး..လိုးပါ..ဆောင့်..ရတယ်..အားရပါးရ ပစ်ပစ်လိုး..အားဟား..ကောင်းလိုက်ထာ နော်..ဆောင့်..ကြိုက်တယ် ဆောင့်လိုး ” မရပ်မနားအော်ခံနေပြီး လက်တွေက လည်းသူ့နို့ တွေသူပြန်ဆွဲညှစ်လိုက်.လီး ကြီးကိုစမ်းကြည့်လိုက်.လက်မောင်းတွေ ကိုဆုပ်ညှစ်လိုက်နဲ့အငြိမ်နေတယ်လို့မရှိ တော့ဘူး။မင်းမင်းကတစ်ချက်ချင်းအရှိန် ပြင်းပြင်းနဲ့ ဖုံးကနဲ ဖုံးကနဲပစ်ဆောင့်လိုး နေတော့ အိဖြူကိုယ်လုံးကြီးမွေ့ယာပေါ် မှာလွင့်လွင့်ပြေးထွက်နေတယ်။ဖင်ကြီးကိုပင့်တင်ပေးထားရင်းပြန်ပြန်လိုးတော့ အထိုင်က မကြာမကြာပြောင်းပြီးလိုးရ ခံ ရတာ သိပ်အထာမကျချင်တော့ဘူး။ဒါနဲ့ မဖြူက မင်းမင်းရဲ့ခြေကျင်းဝတ်နှစ်ဖက် ကိုသူ့လက်တွေနဲ့အတင်းဆွဲထားပြီး လီး နဲ့စောက်ခေါင်းအထိုင်မပြောင်းအောင်ဆွဲ ကပ်လိုက်တေ့ပြီးခံပေးနေတော့ ဆောင့် ချက်တိုင်းကထိထိမိမိ စီးစီးပိုင်ပိုင်ကြီးနဲ့ နင့် နေအောင်အရသာတွေ့နေကြတော့ တာပေါ့။ ” ကောင်းလားဟင်.မဖြူပေးတာကြိုက် လား..အရသာရှိလား..အားရလား ” ” ကောင်းတယ်..စီးပိုင်နေတာပဲ.. အပေးကလဲ တအားကောင်းတယ်..လီး ပြတ်ကျန်ခဲ့မလားမသိဘူး..တကယ့်ကို အပေးကောင်းတဲ့မမပဲ..သူ့သမီးတောင် သူ့လောက်ပေးတတ်မှာမဟုတ်ဘူး.အင့် အင့်..ရော့ ကြိုက်လား လီး ” ” အာ့..ရက်စက်တယ်..နင့်နေတာပဲ. အဟင့် ဟင့်..သမီးကိုမလိုးရသေးဘူး လား.. ဟုတ်လား..အားဟာ့..လိုးကွာ.. လိုး.မအေရော သမီးရော ဗိုက်ကြီးသွား အောင်လိုးပစ်.အာ့..ကောင်းလိုက်တာ. ဆောင့်.လိုး ကောင်းလိုက်တဲ့လီးကြီး ” တအားပစ်ဆောင့်ပြီးလိုးနေမိပေမယ့် သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကအလိုးခံနိုင်အကြမ်း ခံနိုင်တဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးဆိုတော့ လိုးရ ဆောင့်ရတာအားမရတော့ဘူး။
ဒါနဲ့မဖြူ့ကိုယ်လုံးနံဘေးမှာလက်တွေထောက်ပြီး ခြေဆင်းမှောက်ချပစ်လိုက်တယ်။သူ့ခြေ ထောက်တွေကိုပုခုံးပေါ်ထမ်းထားဆဲ ဆို တော့လီးကစောက်ခေါင်းထဲမှမွမွကြီးနစ် မြုပ်နေတုန်းပဲ။စောက်ရည်တွေအရွှဲသား နဲ့ဗွက်စိဗွက်စိ အသံတွေမြည်နေတယ်။ ခြေဆင်းမှောက်လို့်အဆင်ပြေ အထိုင်ကျ ပြီဆိုတော့မှ လီးကိုစောက်ခေါင်းဝ,နဲ့လီး ဒစ်ဖျားတေ့ထိရုံပဲကျန်တဲ့အထိခပ်ဖြည်း ဖြည်း ခပ်ဖွဖွဆွဲဆွဲထုတ်ပြီး အားရပါးရ ပစ်ပစ်ဆောင့်လိုးပစ်တာ အလိုးခံနိုင်လှချည်ရဲ့ဆိုတဲ့မိန်းမ .ပါးစပ်သာပွင့်နေတာ အသံထွက်မလာတော့ဘူး။ဝမ်းခေါင်းထဲ က လေပူနွေးနွေးတွေထိုးထွက်လာတဲ့ ဟင့်ကနဲ ဟင့်ကနဲ အသံတွေပဲ ဆောင့် ချက်နဲ့အညီထွက်လာတော့တယ်။ ပားစပ်ကသာ အသံမထွက်ပေမယ့်.. စောက်ခေါင်းတစ်ခုလုံးရှိသမျှကြွက်သား တွေက လိုးချက်ဆောင့်ချက်တိုင်းမှာလီး တစ်ချောင်းလုံးကိုဆွဲဆွဲစုပ်နေတော့ လီး ကဒီလောက်ကောင်းတဲ့အရသာဒဏ်ကို ကြံ့ ကြံ့မခံနိုင်သေးဘူး။လီးတစ်ချောင်း လုံးတစ်မြုံ့ မြုံ့ တစ်စစ်စစ်နဲ့ လဒစ်ကပိုပြီး အခံရခက်တယ်။လီးဒစ်ကအရသာရှိနေ တော့ တစ်ကိုယ်လုံးကအကြောဆွဲလိုက် လာပြီးတွန့်လိန်ကွေးလာတာ ဖင်ရှုံ့ ပြီးထိန်းထားလို့တောင်မရဘူး။တော်တော် အပေးကောင်းတဲ့မိန်းမ။ ” အားဟာ့..အီး..ကျွတ်ကျွတ်.ကောင်း လိုက်တာနော်..အီးဟီး.ကောင်းလိုက်တဲ့ စောက်ပတ်ကြီး.ကော့ထား.ကော့ ကော့ .အင့် ရော့ အင့်..အူးဟူး..ပေါင်ကြီးတွေ ဖြဲကားပြီးပင့်ကော့ပေးထား.ရော့ ရော့.. လီးရည်တွေအပြည့်ထည့်ပေးမယ်.အင့်.. ရော့.အင့်.အားဟာ..အား.” ” အော်နဲ့ကွာ အူးဟူး..ကောင်းထာ.. လီးရည်တွေအပြည့်ပဲ..ဆောင့်..ဆောင့်ဦး..တစ်ချက်လောက် အင့် အူးဟူး..ဟူး နောက်တစ်ချက်.အင့် အူးဟူး အော်ပါနဲ့ ဆို ခိခိ ” ” အူးဟူး..တအားလိုးလို့ကောင်းတာပဲဗျာ..အန်တီဖြူ့စောက်ဖုတ်ကြီးက အုံ ကြီးပြီးဖောင်းကားမို့တက်နေပေမယ့် လိုး လိုက်တော့စောက်ခေါင်းက.ကျဉ်းကျဉ်း လေး..လီးတစ်ချောင်းလုံးကျပ်ထုပ် စေး ပိုင်နေတာပဲ..” ” ခိခိ..တကယ်လိုးလို့ကောင်းတာလားမောင်ရယ်..ခိခိ ” သူ့စောက်ပတ်ကြီးကလိုးလို့ကောင်းနေ တုန်းပဲလို့ မင်းမင်းဆီကအံ့ဩချီးမွမ်းသံ ကြားလိုက်ရတော့အိဖြူဂုဏ်ယူနေသလို ပဲ.တစ်ခိခိရယ်ရင်းမင်းမင်းပါးတွေကိုတစ် ရွှတ်ရွှတ်နမ်းနေတယ်။
” ခိခိ. ဟိုငမူးရဲ့ လီးသေးသေးလေးနဲ့ ပဲ မဖြူတစ်သက်လုံး အလိုးခံလာရတာမို့ နေမှာပါကွာ..မမဖြူ ဖင်ကြီးတွေကအကြီး ကြီးတွေပဲဥစ္စာ.တော်ရုံလီးလောက်တော့ အေးအေးဆေးဆေးပါ ခ်ခ် ..ခိခိ.. မောင့်လီးကသိပ်ကြီးတယ်ကွ..ဒီလိုလီးကြီးမျိုး အောကားတွေထဲမှာပဲမြင်ဖူးတယ်..ခိခိ.. ပြည့်သိပ်နေတာပဲ ” ” ဟုတ်ပါ့..စောက်ရည်ဘယ်လောက် ရွှမ်းရွှမ်း ပြည့်သိပ်ကျပ်ထုပ်နေတာပဲ..ဟို မမဖြူကအန်ကယ်ဝင်းနဲ့လိုးတော့လဲအခုလို စောက်ရည်ရွှဲအိနေတာပဲလား..” အိဖြူကသူ့မေးစေ့ကိုလက်နဲ့ညှစ်ဆွဲ ပစ်ပြီး ထေ့တေ့တေ့ဖြေတယ်လေ. ” ဟွန့်..သူမနာလိုဘူးပေါ့ ဟုတ်လား. ခိခိ..ဟိုက လီးသေးသေးလေးနဲ့လိုးတာပါဆိုမှ..ဟီဟိ အားမရတော့စောက်ရည် က ဒီထက်တောင်ပိုထွက်မယ်ထင်တာပဲ. ခိခိ ခိခိ..ကြည့်..ကြည့်..သူ့လီးကြီးက အ ထဲမှာ တစ်ဆတ်ဆတ်ခါနေပြန်ပြီ..ဟော .ဟော..ခိခိ..လိုးလဲလိုးနိုင်လွန်းတယ် လူ ပျိုသိုး..ခိခိ ” လီးကိုစောက်ဖုတ်ထဲက တစ်ဝက်သာ သာလောက်ဆွဲထုတ်ပြီးနှစ်ချက်သုံးချက် လောက် ခပ်ဖွဖွကော်ပြီးဆောင့်ကပ် ဖိဖိ ပြီးလိုးပေးကြည့်တော့စကားပြောရင်းဖင် ဆုံကြီးနဲ့ပေါင်ကြီးတွေကိုအထိုင်ကျ နေရာပြင်ပေးတယ်။အလိုးခံနေကျ အထာကျွမ်းပြီးသားဆိုတော့ ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးကို ခပ်ဟ,ဟဆွဲမြှင့်လိုက်ရုံနဲ့ပဲ လီးကြီးကသူ့ စောက်ဖုတ်ထဲကိုအရင်းထိမြုပ်ဝင်နေပြီး ဂွေးဥတွေကအရည်တွေရွှဲအိနေတဲ့သူ့ဖင် ကြားမှာဖိကပ်နေပါပြီ။လဒစ်ဖျားကသား အိမ်ကိုထိုးဖိနေတော့ပူနွေးနူးညံ့တဲ့အထိ အတွေ့ကိုထိထိမိမိသိနေရသလို စောက် ပတ်အတွင်းနံရံကြွက်သား.ညှပ်ရိုးကြွက် သားတွေက တစ်မွမွ တစ်ဖွဖွဆွဲစုပ်ညှစ် ယူနေတော့လီးတစ်ချောင်းလုံးကြွ ကြွပြီး စောက်ပတ်ထဲမှာလှုပ်စိလှုပ်စိဖြစ်နေပြန် တာပေါ့။အဲဒါနဲ့ တစ်တောင်ဆစ်ထောက် လျက်က သူ့ပုခုံးတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ အားယူဆုပ်ဆွဲထားပြီးလီးကိုအပြင်ဖက် ထိဆွဲမထုတ်ပဲဆီးခုံချင်းဖိကပ်လျက် ဖွဖွမွမွ ဖိဖိဆောင့်လိုးပေးနေလိုက်တော့ သူ့ လည်ချောင်းက တစ်ဟင့်ဟင့်နဲ့လေတွေ ပြန်ထွက်လာကြတယ်။ ” အားဟား..ကောင်းတယ်မောင်..တ အားကောင်းတယ်..အာ့ဟာ့..လီးကြီးက စောက်ခေါင်းထဲမှာအပြည့်ပဲ..ဟင့်.အင့်.. လူက အပေါ်ဖက်ကို တက်တက်ပြေးနေတယ်ကွာ.ဒီကိုယ်ကြီးကိုတောင်လွင့်ပြေး နေအောင် လိုးတယ်နော်..အင့်..အင့်..ဒီ ခေါင်းအုံးကြီးဖင်အောက်မှာခံပြီးလိုး..” ကပ်ဆောင့်ခံရင်းခေါင်းအုံးတစ်လုံးယူ ပေးတာနဲ့ သူ့ဖင်အောက်ထိုးထည့်ပြီးပြင် ပေးနေတော့ အပြင်ကမီးခလုတ်ဖွင့်သံ.. ရေသောက်သံ..ညည်းတွားသံတွေကြားရတယ်။
” ဖြည်းဖြည်းမောင်..ဟီဟိ..ငမူးကြီး ရေလာသောက်တာဖြစ်မယ်..ခိခိ..သိပ်မ ဆောင့်နဲ့ဦး..သူ့မယားကအိပ်ယာထဲမှာမ ရှိပဲ လင်ငယ်နဲ့လာ အလိုးခံနေတာသူမသိသေးဘူး..မူးနေတုန်းပဲ..ခိခိ ” ကိုယ်က ကပ်ဖိဆောင့်လိုက်..သူကဆွဲဆွဲစုပ်လိုက်နဲ့ တိတ်တိတ်လိုးနေကြရ တာအတော်လေးကြာတယ်။ကြာလေ.. အိဖြူက နှာထန်လေ..မျက်နှာတစ်ခုလုံး နီရဲလာပြီးမျက်လုံးတွေဝင်းဝင်းတောက် လင်းလက်လာတယ်။ဟိုလူကလဲ ပြန်မ ထွက်သွားသေးပဲ ခေါင်းကိုက်ပြေအောင် ခဏထိုင်နေတာလားမသိဘူး။အိဖြူနှာထန်နေပုံ..ဇောသန်နေပုံကအတော်ကြီး ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို ဖက်အား.ခွအား.နမ်းအား.စုပ်အားတွေ တင်းကြပ်လာတော့. ” မကိုက်နဲ့နော်.ဟင်း..ဒီကပါးရိုက်ပြီး ပစ်ဆောင့်လိုးပစ်မှာ..ဒီတစ်ခါအသေလိုး ပစ်မှာ..ပါးစပ်ထဲကကို လီးပြန်ထွက်လာ အောင် လိုးပစ်မှာ ” မဖြူကအောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုသွားနဲ့ကိုက်ပြီး မျက်စောင်းတောက်တောက် ကြီးပစ်ထိုးတယ်။သူက အဲလိုကြီးကို အ လိုးခံပစ်ချင်နေတာ ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ်လောက်နေတော့ မီး ခလုတ်ပိတ်သံ..ပြန်ထွက်သွားတဲ့ခြေသံ တွေကြားရပြီ ဆိုတာနဲ့သူ့ပုခုံးမှာ ပူကနဲ နေအောင်အကိုက်ခံလိုက်ရတော့တာပါ ပဲ။ဒီလောက်သတိပေး..သတိထားနေပါလျက်နဲ့ အကိုက်ခံလိုက်ရတာဆိုတော့.. မဖြူပါးကိုနှစ်ချက်လောက်အားရပါးရပစ် ရိုက်ထည့်ပြီးမထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်နဲ့ ခပ် သွက်သွက်.တရကြမ်းသွက်ကြီးပစ် ပစ် ဆောင့်လိုးပစ်မိတယ်။တစ်သက်လုံးမခံခဲ့ရဖူးတဲ့ပါးရိုက်ချက် ဆောင့်ချက် ပစ်ပစ် လိုးချက် တွေကမဖြူကိုပိုပြီးသွေးဆူလာ စေလေသလားတော့မသိဘူး..မွေ့ယာအ ပေါ်ကိုတစ်ပေလောက်အထိကြွကြွတက် သွားအောင်သူ့ကိုယ်ကြီးမြှောက်မြှောက် ပင့်ပြီးပြန်လိုးတော့တာပါပဲ။ကိုယ်ကဖိပြီး ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်..သူကပင့်ပြီးပြန်လိုး ပစ်လိုက်နဲ့ ကုတင်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်ထဲ နဲ့ပတ်ချာလည်နေကြတာတစ်နာရီကျော် ကြာတယ်။
ဒူးထောက်လိုးလိုက်.ဆောင့် ကြောင့်ထိုင်လိုးလိုက် မှောက်လိုးလိုက်နဲ့ ဘယ်လိုလိုးလိုး အိဖြူကစိတ်လိုလက်ရ အလိုးခံတာပဲ။တစ်နာရီကျော်ကျော်ကြီး ရေကုန်ရေခမ်းလိုးပစ်တော့ နှစ်ယောက် သားမှာ ချွေးးတွေနစ်ပြီးစောက်ရည်တွေ ဗွက်ပေါက်နေပြီ. ” အနောက်ကလိုးပေးမောင်..ကုတင် အောက်ကိုဆင်းပြီးမတ်တပ်ရပ်လိုး..ဖြူ ကုတင်ပေါ်မှာဖင်ကြီးကုန်းပေးထားမယ်. ဒီတိုင်းသာလိုးနေရင်တော့ ဖြူ့ လင်ငယ် လေး.အမောဆို့သေလိမ့်မယ်..အဲ..အဲ့… ဖင်လိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး မောင်ရဲ့..အီး ဟီး..စောက်ပတ်လိုးဖို့ပြောတာ..ဆိုးပါ့.. စောက်ပတ်ထဲလိုး..စောက်ပတ်ကိုလိုး ” လက်တစ်ဖက်နဲ့လီးကိုနောက်ပြန်ကြီး လှမ်းဆွဲပြီးသူ့စောက်ခေါင်းပေါက်မှာတေ့ ထားပေးတော့ ဖင်ကြီးကလှလှပပကြီး ဝန်းကားထွက်နေတယ်၊ခါးချိုင့်နှစ်ဖက် ကိုလက်တွေနဲ့ဖိပြီးအိတိအိတိနဲ့ထိုးသွင်း တော့ဖင်ကုန်းလိုးရတာ သူ့စောက်ခေါင်းကပိုကျပ်နေသလိုပဲ။အားမလိုအားမရမို့ပစ်ပစ်ဆောင့်လိုးတော့ စောက်ခေါင်းထဲက လေပြန်ထွက်သံတစ်ဖူးဖူး တစ်ဖုဖု. တစ်ဖွတ်ဖွတ် တစ်ဘွတ်ဘွတ် နဲ့ဆောင့်လိုးချက်တိုင်းမှာဆူညံနေတယ်။ဖင်ဆုံ လုံးကြီးတွေနဲ့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ့်ဆီးခုံတွေ ပစ်ပစ်ရိုက်သံကတစ်ဖျောင်းဖျောင်း တစ် ဖျန်းဖျန်းနဲ့မို့ဒီအသံတွေကြားနေရတာက နှာစိတ်ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်နေတယ်။မတ် တပ်ရပ်လိုးရတာက ကိုယ်နေဟန်ထားအဆင်ပြေတော့လီးအရသာခံ ဇိမ်ဆွဲပြီး အကြာကြီးလိုးပစ်လိုက်တာ ” ဆောင့် ဆောင့် လိုး အို့..” ထွတ်ကုန်ပြီ မောင် အ အား အားးး…မဖြူ ရဲ့ပြီါ်ဆုံးခြင်းနောက်မှာ ကျွှန်တော်လည်း လရေတွေ မဖြူ အဖုတ်ထဲ ပန်ါ်ထည့်လိုက်လေတော့သည် …..ပြီး။
#ဒေါ်တင်တင်ကြီးတို့မိသားစုနဲ့မောင်ထွန်းလှ( စ/ဆုံး )